भारतमा पहिलोपटक कोरोनाका कारण एक जनाको मृत्यु भएपछि देशभर हंगामा, के भन्छन मोदी ? — Imandarmedia.com
भारतमा पहिलोपटक कोरोनाका कारण एक जनाको मृत्यु भएपछि देशभर हंगामा, के भन्छन मोदी ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण भारतमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । कोरोनाको संक्रमणमा रहेका कर्नाटकको कलबुर्गीमा ७६ वर्षीय एक व्यक्तिको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ । उनी साउदी अरेबियाबाट केहिदिन अघिमात्र भारत आएका थिए ।
केन्द्र सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार साउदीअरबबाट फर्केपछि स्वास फेर्न अप्ठ्यारो, खोकी र निमोनियकोल लक्षण देखिएपछि मार्च ६ मा एक डाक्टरले उनको घरमा नै उपचार गरेका थिए । तर स्वास्थ्य लगातार बिग्रेपछि मार्च ९ मा उनी कलबुर्गीमा एक निजी अस्पतालमा भर्ना भए । अस्पतालको प्रराम्भिक जाँचमा उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंका गरियो ।
त्यसपछि विस्तृत जाँचका लागि बेंग्लोरको ल्यावमा परीक्षण भयो । जाँचको रिपोर्ट आउनु अगाबै उनलाई हैदराबादको एक निजी अस्पतालमा भर्ना गरियो । त्यसपछि मार्च १० मा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो । कर्नाटक प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री बि श्रीमालुले एक ट्वीट गरेर मृतक व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको बताएका छन् । यस बिषयमा मोदीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले कोराना भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरेपछि मुलुकको सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले पर्यटक भिसा रोक्ने निर्यण गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको विहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पर्यटक भिसासँगै अरु थप मुलुकका नागरिलाई अनअराइभल भिसा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यद्यपी यसबारेको पूर्ण विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । चीनबाट फैलिएर युरोपियन र केही मध्यपूर्वका देशमा समेत कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेकाले थप देशको भिसा रोक्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
‘शुरुमा पाँच मुलुकबाट आउने भिसा रोक्ने भनेकोमा अझै केही थप देशहरुको भिसा रोक्ने निर्णय भएको छ’, कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता खतिवडाले भने ।
सूचना एकद्धार प्रणालीबाट जाने भएकाले समितिको सचिवालयले त्यसको आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । अहिलेसम्म हवाई उडानमा भने कटौती नगरिएको उनले प्रष्ट पारेका छन् । यसअघि सरकारले चीन, इरान, इटाली, फ्रान्स जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया र जापानको अनअराइभल भिसामा रोक लगाएको थियो ।
भारतले आफ्नो देशको नाकामा नियमन गर्दै खास नाकाबाट आवागमन खोल्ने निर्णय गरेकाले नेपालतर्फबाट पनि त्यही नाका प्रयोग गरिने भएको छ । त्यसको आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको खतिवडाले बताएका छन् ।
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका १२७ मा पुगेको छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको यो भाइरसको संक्रमणबाट ४ हजार ९ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
(कोभिड–१९)को संभावित संक्रमणबाट बच्न भन्दै सरकारले ८ देशबाट आउने विदेशी तथा नेपालीलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिने जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका ८ वटा देशबाट आउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई १४ दिने क्वारेन्टाइनमा राखिने जनाएको हो ।
सरकारले चीन तथा चीन स्वशाति क्षेत्र, इरान, इटाली, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनबाट आउने नेपाली तथा विदेशीलाई १४ दिने क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी गरेको हो । सरकारले ती देशबाट आउने नागरिकले विमानस्थलमै पाउने गरेको अनअराइभल भिसा यसअघि नै रोकिसकेको छ ।
ती देशबाट आउने विदेशी नागरिकहरुले आफू कोरोना भाइरसबाट मुक्त रहेको प्रमाण देखाए मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउनेछन् । ती देशबाट आउने नेपालीहरुलाई भने क्वारेन्टाइनमा राखी कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएपछि मात्रै घर पठाइने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिए ।
विदेशी पर्यटकको ट्र्याकिङ गरिन
स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले कोरोनाको सम्भावित संक्रमण रोक्नका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी काम भइरहेको पनि जानकारी दिए । सचिव कोइरालाका अनुसार कोरोनाको संभावित संक्रमण रोक्नका लागि स्थानीय तहमा कमिटी गठन गर्ने काम शुरु गरिएको छ ।
उक्त कमिटीले स्थानीयस्तरमा कोरोना भाइरसबारे जनचेतना फैलाउनुका साथै कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने छ । स्थानीयस्तरमा गठन हुन कमिटीले आफ्नो स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने सचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।
सचिव कोइरालाले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण भइसकेको अवस्थामा बिरामीहरुलाई भर्ना गरेर उपचार गर्न सबै प्रदेशका अस्पतालहरुमा आइसोलेसन वार्डहरु तयार गरेर राखिएको बताए । यस्तै, जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि आइसोलेसन बेडहरु तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको सचिव कोइरालाको भनाइ छ ।